इमेल नम्बर चार - शखदा साहित्य
इमेल नम्बर चार
12:35 AM कथा
प्रिय हिमशिखा !
आज तिमी मेरो जीवनमा ठूलो मार्गदर्शक बनेर आएकी छ्यौ । मैले आज जीवनमा ठूलो ज्ञान प्राप्त भएको महसुस गरेको छु । हो वास्तवमा तिमीसँग मैले प्रेमको नाटक गरेको थिएँ । यस्ता नाटक मैले धेरै जनासँग गरिसकेको छु । राम्रा पूmलहरूलाई भँवरालेझँै चुस्दै हिँड्नु मेरो शौख थियो । राम्रा पूmलहरूको रस लिएर पछि त्यसलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । धेरै जनासँगको धेरै थरीको स्वाद लिएर बाँच्नु पो जिन्दगी । यहाँ नया–ँनयाँ स्वाद र अनुभव लिएर बाँच्न पाइने जिन्दगीमा कहाँ भावुक बनेर एक जनाको मायाको डोरीमा अड्की राख्ने र ? त्यसैपनि हामी छोरा मान्छेलाई समाज र प्रकृतिले नै कति ठूलो उपहार दिएको छ, जे गरे पनि हुने जसो गरे पनि हुने । न समाजको बन्धन, न त हामीमा न कतै खोट र दोष लगाउने ठाउँ नै दिएको छ । प्रकृतिले नै हामीलाई यस्तो जीवन दिएको छ कि हामी जे गर्न पनि सक्छौँ । यस्तो सुखमय जीवनमा कहाँ त्यो परम्परागत प्रेमको ढाँचामा बाँधिएर प्रेमको त्यो ढलिसकेको थोत्रो आदर्शलाई घोकेर जीवनलाई निरर्थक बनाउने ? यस्ता बनाउनेहरू नै मूर्ख हुन् भनेर म सोच्दथेँ । त्यसैले मैले तिमीलाई गरेको प्रेम पूर्णत नाटक थियो । पछि मेलमा पनि मैले तिमीलाई प्रेम गर्थे भनेर ढाँटेर लेखेको थिएँ । तर अब त सबै कुरा समाप्त हुँदैछ म किन ढाटुँ र ? तिमीलाई ढाँट्नु भनेको आफैलाई ढाँट्नु बराबर भएको छ मलाई । त्यसैले म तिमीलाई यो अन्तिम मेलमा सबै कुरा लेख्दै छु ।
मैले जीवनमा मुम्बई पुगेर यति ठूलो दुर्घटनामा परुँला भन्ने सोचेको थिइनँ । मैले सङ्गीतालाई पनि केही समय प्रयोग गर्ने र आफ्नो पार्टनरसीपको पैसा लिएर हिँड्ने विचार गरेको थिएँ । पछि सङ्गीताको हत्या भएपछि म निकै त्रसिद बनेँ । आफसेआफ मानसिक असन्तुलन बढ्दै गयो । मलाई शरीरको भोग तृष्णाभन्दा पनि मानसिक सन्तुष्टिको आवश्यकता पर्न गयो । मलाई एउटा गहिरो माया र विश्वासको आवश्यक परेको महसुस भयो जुन कुरा म तिम्रो समिप्यताबाट प्राप्त गर्न सक्दथेँ । त्यो मानसिक तृप्तिको उपचार तिमीबाट मात्र सम्भव थियो अरू कोहीबाट हुन सक्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ । किनकिन गोवाको पुलिसस्टेशनमा एक्लै बस्दा मलाई अनेकौँ मानसिक तनावले सताउन थाल्यो । हरदम तिम्रो यादले मलाई सताइरह्यो । यसको रहस्य मैले बुझ्न सकिनँ । जीवनमा धेरै केटीलाई मैले उपभोग गरेर छोडेको छु तर तिम्रो सम्झना किन यसरी गहिरो गरी बस्यो मैले बुझ्न सकिनँ । सायद तिम्रो त्यो पवित्र प्रेमको शक्ति हुनुपर्छ । पछि मेल पढ्दा प्रत्येक क्षण मेरो सम्झना गर्दै आँसु झार्दै गरेको ती दुखिद नयनले मेरो आत्मालाई तडपाइरहेको महसुस मैले गरेँ । वास्तवमा नै मैले तिमीलाई यसरी खेलौना बनाएर तडपाउनु हुन्थ्यो । तर मैले जीवनमा एउटा व्यावहारिक ज्ञान, आदर्श र प्रेम भन्ने कुरा कहिल्यै पढ्न पाइनँ । मेरो बुबाआमाले माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक पढाइको लागि मलाई मुम्बईको होस्टेलमा नै छोडेर आएका थिए । होस्टेलमा मेरो विभिन्न किसिमको खराब साथीहरूको सङ्गत हुन थाल्यो । ममा खराब प्रवृत्तिको विकास भयो । जवानीको खुड्किलोमा टेक्तै गरेको मैले पारिवारिक माया, मोह, प्रेम, आदर्श र विश्वासजस्ता कुराहरूबाट टाढा रहन पुगेँ । यस्ता कुरा परिवारमा बसेर नजिकबाट हेर्न पाइनँ । होस्टेलको आवारा केटाहरूसँग राम्रा केटीहरूलाई जिस्काउँदै हिँड्नु, उनीहरूको पछि लाग्नु, उनीहरूलाई दुःख दिनु मेरो आदर्श भयो । होस्टलमा केटाहरूको माझ जति धेरै केटी पट््याउन सक्यो उति ऊ हिरो हुने चलन थियो । त्यसैले जतिसक्दो धेरै केटीलाई फसाएर सके उनीहरूको यौनआनन्द लिएर छोड्ने मेरो आदत हुन थाल्यो । यसमा प्रायः केटीहरूको सहमतिमा नै हुन्थ्यो । यसरी क्याम्पस र होस्टेलमा मैले नै सुपर हिरोको तोक्मा पाएको थिएँ । फेरि अहिलेका स्मार्ट केटीहरू जति धेरै आफूले केटाहरूलाई पट््याउन सक्यो उति आपूmलाई हिरोइन ठान्दथे । त्यस्ता केटीहरूको शेखी झार्न पनि म केटी पट््याउने कलामा निपूर्ण भएको थिएँ । केही समय उनीहरूसँग घुमघाम गरेपछि उनीहरूबाट पाइने त्यो दैहिक स्पर्श र कतिपय ठाउँमा यौनिक सुखभोगपछि म छोडिदिन्थेँ । एउटा आर्दश प्रेम के हो म आफूमा महसुस गर्नसम्म पनि चाहन्नथेँ । त्यो परम्परागत कथन अब इतिहासको खाल्डो पुरिसकेको छ भन्ने मेरो मानसिकता थियो । त्यो त एउटा कथाको मक्किसकेको पिरामिडजस्तो लाग्दथ्यो । यो अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको समयमा मानिस कहाबाट कहाँ पुगिसके हामी भने उही खिइसकेका प्रेमका अनर्गल राप अलापिरहेका छौँ । यस्ता आदर्श र भावुक कुरा सुन्दा पनि मलाई रिस उठेर आउँथ्यो । एकपल्ट होस्टेलमा मेरो एउटा साथीले एउटी केटी साथीलाई पट््याएछ पछि उसले धोका दिइछ । त्यो मेरो साथी कैयौँ दिनसम्म त्यो केटीको सम्झनामा पागलजस्तो भइरह््यो । कैयौ दिनसम्म खानापिना त्यागेर बिमारी नै प¥यो । मलाई सारै रिस उठेर आयो । मैले उसलाई निकै झपारेको थिएँ । हो यस्ता आशिकहरूदेखि मलाई रिस उठ्ने गर्दथ्यो । हुन पनि हो उनीहरूलाई मुस्किलले एक–दुई जना केटीले मन पराएका हुन्थे । उसले पनि धोका दिएपछि उनीहरूको हालत यस्तो हुने गर्दथ्यो । उनीहरू आफ्नो पौरुषत्वमा कमी भएको महसुस गरी हिनभावनाले ग्रसित हुने गर्दथे । तर मलाई कहिल्यै यो अवस्था आएन । म एकातिर केटी पट्याउने कलामा निपूर्ण थिए भने शारीरकरूपले पनि निकै हृष्टपुष्ट थिएँ । प्रायः केटीहरू मेरो वरिपरि मौरी घुमेझैँ घुम्न गर्दथे । मेरो व्यक्तित्वबाट उनीहरू मोहित बन्दथे । यसबाट पनि ममा आदर्श प्रेमले कहिल्यै छहारी हाल्न पाएन । म त उन्मुक्त भैरवजस्तै सबै रागिनी नारीहरूको चाहनामा पर्दथेँ । मुम्बईको पढाइ सकेपछि नेपालको विश्वविद्यालयमा पढ्न आएपछि ममा निकै परिपक्वता आइसकेको थियो । म आफ्नो अध्ययन र करियरमा निकै सजग भइसकेको थिएँ । अचानक तिमीजस्तो रूपवती सँग मेरो भेट हुन गयो । भेट भएपछि मभित्र भएको भोगविलासीको अतृप्त चाहनाले टाउको उठाउन थाल्यो । समयले यस्तो गरिदिएको थियो कि तिमीलाई पट्याउन मैले कुनै कला प्रयोग गर्नुपरेन । आफ्नै भागमा यति सुन्दर पूmल पाएपछि मैले अरू केही सोचिनँ । बस् तिम्रो यौन र वासनाको न्यानो आँचलमा आपूmलाई सुम्पिदिएँ । तर.. तर तिमी सामान्य केटीभन्दा धेरै फरक रहेछौ । मैले सोचेको थिएँ तिमीजस्ती रूपवतीको निकै नै दिवाना बनेका साथीहरू होलान् । तर तिम्रो मेलबाट तिमीले जुन आफ्ना भावना व्यक्त ग¥यौ त्यसले म निकै प्रभावित बन्न पुगेँ । मैले तिमीले यसरी मप्रति आत्मीय भावना राख्छौ भन्ने सोचेको थिइनँ । अब सबै कुरा बितिसकेको छ । तर पनि मैले यी सब मेरा कुरा तिमीलाई राखेर मैले ठूलो आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकेको महसुस गरेको छु ।
मैले जीवनमा कल्पना नै नगरेको कुरालाई साक्षात्कार गर्नुपर्ला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । यो घटनापछि मेरो जीवनले ठूलो मोड लिएको छ । तिम्रो पछिल्लो मेलले मलाई ठूलो मोक्ष प्राप्त भएको महसुस भएको छ । वास्तवमा म तिम्रो लायक पनि छैनँ । तिमीभित्रको त्यो सुन्दर प्रेमको फोटो खिचेर त्यसैलाई हृदयमा प्रतिस्थापन गरेर म जीवनभर बाँच्नेछु । सायद तिमीले मेलमा भनेझैँ म पनि उही तिम्रो प्रेमको बिछोडलाई एउटा शक्तिमा परिणत गरेर बाँच्न चाहन्छु र प्रायश्चित गर्न चाहन्छु । सके मलाई माफ गरिदेउ हिमशिखा । तिमी सधैँ मेरो जीवनमा प्रेमको हिम शिखर भएर बसिरहनेछौ । तिम्रो भविष्य उज्ज्वल बनोस् तिमीलाई मेरो यही हार्दिक कामना छ ।
उही तिम्रो गौरव